SOCXO: Nkwado Nkwado na -nye ọnụahịa arụmọrụ | Martech Zone
SOCXO: Nkwado Nkwado na -nye ọnụahịa arụmọrụ
Tuesday, February 20, 2018 Mọnde, Febụwarị 19, 2018 Mukund Krishna
Dịka akụkụ nke ọdịdị ahịa Ọdịnaya, Dijitalụ Ahịa abụrụla ụzọ kachasị mma maka ụdị iji wee rute ma tinye ndị na-ege ya ntị n'ịntanetị. Typicaldị Digital Marketing a na-ahụkarị gụnyere Email, Search na Social Media Marketing ma jirila usoro nhazi na ịkwụ ụgwọ iji mepụta ma kesaa ọdịnaya ntanetị n'ịntanetị.
Agbanyeghị, enweela nsogbu na arụmụka banyere atụmatụ ahụ, ihe atụ, nsonaazụ ya na ROI nke usoro mgbasa ozi a na-akwụ ụgwọ maka ịzụ ahịa dijitalụ. Ọ bụ ezie na Email na Search nwere ike ịnye ụkpụrụ bara uru nke nha ahịa ahịa, Social Media Marketing na-eche ihu mgbanwe algorithmic mgbe niile na obere ihe bara uru nke itinye aka na ndị ọrụ na ntanetị mgbasa ozi.
Ihe dị nsọ nke ahịhịa nke ihe a na-akwụ ụgwọ ma ọ bụ mgbasa ozi na mgbasa ozi ọha na eze abụwo ihe ịma aka mgbe niile.
O doro anya na, enyere ndị ọrụ aka ka ha dị mkpa karịa akara / mgbasa ozi na ọdịnaya site na ndị enyi, ndị ezinụlọ na ndị ọgbọ nwere ndị ọrụ na ndị ọrụ na mgbasa ozi mgbasa ozi dị mkpa na njikọ aka.
Humanizing Social Media Marketing site na Ndị Nkwado Brandkpụrụ Akwadoro
Advocacy Marketing, echiche na-agbanwe agbanwe ma ọ bụ ihe ọhụụ nke ahịa ọdịnaya, na-achọ iji dozie ụfọdụ nsogbu ndị dị n'elu maka sdị. Nkwado Nkwado bụ ọwa ahịa azụmaahịa zuru oke maka sdị site n'aka ndị nwere ya.
Nkwado Nkwado site na nyiwe dịka SOCXO na-enye usoro dịpụrụ adịpụ maka ire ahịa site na ịmepụta usoro mgbasa ozi mmekọrịta maka ụlọ ọrụ nke nabatara ụkpụrụ ndị a ma na-eicsomi omume nke mgbasa ozi mmekọrịta n'etiti ụlọ ọrụ.
Advocacy Marketing, na okwu dị mfe, na-enyere ụdị aka:
Leverage ndị nketa (ndị ọrụ, ndị okenye, ndị mmekọ, ndị ahịa na ndị fan) nke otu Brand
Curate na-enye ha dị iche iche na nghọta ika mkpa ọdịnaya
Mepụta ntụkwasị obi, nghọta na itinye ha n'ọrụ dị ka ndị na-akwado ndị ahịa
Kesaa ma gbasawanye ụdị ọdịnaya a bara uru na ntanetị na mgbasa ozi mmekọrịta ha
Meziwanye iru arụ ọrụ na njikọ nke ọdịnaya na mgbasa ozi mmekọrịta
Mee ka akara aka na-enweghị atụ na azụmaahịa azụmaahịa maka ụdị
Ndụmọdụ Ahịa Uru
Ejikọtara ndị niile metụtara ya (ndị ọrụ, ndị okenye, ndị mmekọ, ndị ahịa na ndị agbapụ) nke otu Companylọ ọrụ na otu weebụsaịtị na ekwentị mkpanaaka iji jikọọ ma soro Brand mee ihe ọ bụla, oge ọ bụla
Na -emepụta usoro nkwukọrịta tụkwasịrị obi na nke doro anya maka Companylọ ọrụ / Ahịa nwere ndị ọrụ ya na mpụga
Na-eme ka ndị ọrụ na ndị mmekọ nwee ike inweta ihe ọmụma banyere atụmatụ ụlọ ọrụ, usoro ụlọ ọrụ / ahịa, ozi ndị asọmpi, ngwaahịa na ọrụ ọhụụ
Na-enye ohere ịnweta ọdịnaya Brand n'ihe gbasara mkpọsa ahịa, mkpọsa ọrụ, mkpọsa ngwaahịa, blọọgụ, mmụta ọdịnaya na ozi ahịa dị na mpụga.
Na-enyere ndị ọrụ ya aka ịkọwa echiche na echiche ha dị ka onye ndu echiche na ọdịnaya ihe ọmụma
Na-agba ndị ọrụ ume, ndị mmekọ, ndị ahịa na ndị na - akwado ha dịka ndị na - akwado nkwado iji bulie ọdịnaya site na netwọkụ mmekọrịta ha na mmekọrịta ha ma bụrụ ndị na - emetụta Brand
Na-enyere ndị ọrụ aka aka na mgbasa ozi mgbasa ozi - akara ndị ọrụ
Na-eme ka Slọ Ahịa, Nlekọta Ọrụ na Mgbasawanye Mgbasa Ozi site na ndị na-akwado ya
Na-ege ntị na nkwupụta nke ndị ọrụ, ndị mmekọ na ọdịnaya, echiche
Ghọta, kwado ma kwụọ ụgwọ ndị na-akwado maka ịkwado Ahịa
Mee ka ndị ọrụ were aka, njigide na afọ ojuju
Meziwanye ọdịbendị ebe ọrụ yana itinye aka na ndị otu azụmahịa
Kedụ ka SOCXO si eme nke a?
SOCXO abụwo otu n'ime ndị mbata na ndị na-agba mgba siri ike na ọdịnaya na nkwado mgbasa ozi ahịa. Imirikiti nyiwe dị ugbu a na ohere ịkwado ahịa naanị na-ekwu maka mkpa ndị na-ere ahịa n'ihe gbasara nkesa ọdịnaya ma ọ bụ mkpa nkwukọrịta ebe ọrụ.
Agbanyeghị, SOCXO egosipụtala onwe ya iche site na afọ ojuju ọ bụghị naanị mkpa nke ndị na-ere ahịa na Companylọ Ọrụ, o nyeere ha na ndị otu azụmaahịa ndị ọzọ aka dịka PR, HR, Sales, Product and the Leadership ka ha na ndị ọ bụla metụtara soro na-aga n’ihu. otutu itinye aka na ntinye aka iji mee ka ndi oru ha na Brand and Company.
Ebumnuche SOCXO na-enye onyinye dị mfe ma dị iche iche yana onye ahịa siri ike ịbanye na usoro nchịkwa ihe ịga nke ọma iji mejuputa mgbasa ozi na itinye aka na ọkwa ọ bụla.
E wezụga inyere Companlọ ọrụ aka ịkọwanye Ọdịnaya Brand ha na Social Media site na ndị na-akwado akara ha, SOCXO na-enyere ụlọ ọrụ aka ịkọba ndị ọrụ ha ma mepụta akara aka ha na Social Media.
SOCXO bụ onye ndu na-akwalite echiche nke ịzụ ahịa ịkwado na India na onye na-adịbeghị anya na United States nwere ihe karịrị 25 Brands dị ka ndị ahịa n'ime otu afọ nke ịmalite onyinye ya na 2017.
Njirimara Ngwaahịa SOCXOs na Ihe Dị iche
Okike na nchoputa - Iji kpochapụ ihe ịma aka mgbe niile nke ịmepụta na ịchọpụta ọdịnaya dị ọhụrụ, SOCXO na-enye ikike iji weghachite ma bipụta ọdịnaya ngwaahịa site na blọọgụ, ibe mgbasa ozi na ibe ya, na ntanetị ndị ọzọ, wepu ọdịnaya ahụ, ma tinye mgbakwunye ọdịnaya.
Mgbanwe ọdịnaya na mbipụta ọdịnaya - Site na imepụta ọdịnaya nwere ọgụgụ isi, Branddị nwere ike hụ na ọ na-agbaso usoro nkwukọrịta ma na-enye ndị ọrụ ya, ndị mmekọ na ndị ahịa ihe dị mkpa / nke nwere nghọta. Ọdịnaya nchịkwa nwere ike ịtọ nzacha na-akpaghị aka na-ebipụta ọdịnaya ka ya ọrụ site na iji Afọ kalenda na setịpụrụ ọdịnaya Mmebi wepụ ha kwụsịrị adị. Ndị ọrụ nkwado nwere ike ịtọọ oge iji kesaa ọdịnaya n'ime ibe ha na Social Media.
Gamification na wardsgwọ Ọrụ - Egwuregwu arụnyere na-arụ ọrụ maka ọrụ onye ọrụ n'elu ikpo okwu maka ịmepụta, mbipụta na ịkekọrịta ọdịnaya, itinye aka na ngwa dị n'ime. Onye ndu na Baajị na-eme ka ndị na-azụ ahịa nwee ike ị nweta ma mata ndị na-akwado ya na-arụsi ọrụ ike ma na-enye aka maka nkwado na itinye aka na ika. Creationgwọ ọrụ ụgwọ ọrụ na ihe mgbapụta iji mee ka ndị nchịkwa nwee ike ịkwalite itinye aka na ndị ọrụ na ọdịnaya ọdịnaya.
Nchịkọta na njikọ aka - Nchịkọta nchịkọta data sitere na ọwa mgbasa ozi mgbasa ozi niile na ọdịnaya na ọrụ onye ọrụ, gụnyere ọgbọ ndu, nyocha peeji, nnọkọ na usoro mmekọrịta. Mmekọrịta na nchịkọta Google yana ịkọ akụkọ dị mkpa na ọdịnaya na-ewu ewu, ọdịnaya ndị kachasị akọrọ yana mkpado ndị ọrụ kachasị ọrụ.
Ngwa Ngwa Ngwa Egwuregwu - SOCXO na-enye ngwa ahịa pụrụ iche na nke onye ọ bụla ewepụtara maka ika ọ bụla iji hazie mmetụta nke ngwa ahụ maka ndị na - akwado ya (Ndị Ọrụ)
SOCXOs Dị iche
Ọ bụ ezie na ndị ọkpụkpọ egwuregwu ndị ọzọ na-elekwasị anya naanị n'ịkekọrịta ọdịnaya dị ka ọrụ bụ isi nke ngwaahịa ha, nkwenye siri ike SOCXOs bụ na ndị ọrụ nwere ọrụ bụ ndị nkwado kachasị mma. N'ebe ahụ, SOCXO na-ekepụta ngwakọta ekele nke atụmatụ agbakwunyere iji mejupụta ebumnuche nke ịzụ ahịa ịkwado.
E wezụga akụkụ bụ isi nke ịkekọrịta na ịlele ọdịnaya ọdịnaya, SOCXO na-enye ọrụ ntinye aka nke ndị ọrụ siri ike, na-eduga njirimara magnet na nghọta nke data iji mee ka ndị na-akwado akara jikọtara na Brand na Platform site na Ngwa Micro-Service:
Ihe omuma ihe omuma ihe omuma nke SOCXO site na iji okwu okwu putara ihe na enyere aka weputa ma kpochapu ihe ndi ozo na-akpaghi aka site na web ozugbo - si otú a belata mgbalị ichota ihe ohuru kwa ubochi.
Ebumnuche echiche na micro-apps nyocha na-enye nsonye oge na nzaghachi na-aga n'ihu site na ndị na-akwado ya
Ndị ọrụ na-ahụ maka ahụmịhe iji nweta nghọta na ntinye ọrụ na afọ ojuju
Mwekota na Learning Content Management Systems na CRMs
Wuru na-eduga Generation na Kpọọ-na-Action nkwụnye na ọdịnaya amplification ọdịnaya nke ika / mkpa ọdịnaya na mpụga saịtị
Ndepụta na Mmetụta nke Mgbasa Ọgbọ niile
Nchịkọta Cognitive nke Onye ọrụ na ntinye aka iji hazie ọdịnaya
SOCXO Basednye ọnụahịa arụmọrụ
SOCXO bụ naanị usoro mgbasa ozi na-akwado mgbasa ozi nke na-enye ụdị ntinye ọnụahịa arụmọrụ, kama ịnye ọnụahịa dabere na ndị ahịa nke a na-ahụta dị ka ọnụ ahịa enweghị atụ nke ndị ahịa. Cdị SOCXO pụrụ iche nke ịkwụ ụgwọ ọ bụla kwekọrọ n'ụzọ doro anya na ọrụ a tụrụ anya ya na nsonaazụ nke omume Onye ọrụ na ikpo okwu, nke bụ ịkekọrịta ọdịnaya ọdịnaya na netwọkụ Social Media ha.
Ndị na-ere ahịa ejirila ogologo oge nweta ọrụ ọnụego yana ọnụahịa arụmọrụ maka ịre ahịa ọdịnaya na usoro nke efu kwa echiche, ọnụahịa kwa Pịa na ụgwọ kwa mbu wdg. Ụdị ọnụahịa SOCXO na-enye mgbanwe na mmefu ego azụmaahịa na ọnụahịa dabere na ọnụ ahịa bara uru, nke na-enye ndị ahịa ohere ịhụ ROI na uru site na SOCXO gaa na ebumnuche ha n'ịzụ ahịa mgbasa ozi.
SOCXO ricnye ọnụahịa
Nkwado dị ka echiche na ahịa ahịa dị njikere iji nweta nnukwu ọhụhụ na nkwụsị n'etiti slọ Ọrụ na Alọ Ọrụ na 2018. Advocacy Marketing achọtala ohere ya na oghere ahịa Ọdịnaya jikọtara na Email, Search na Social Media Marketing ma ga-arụ ọrụ dị mkpa dị ka uzo ozo iji nye aka, kwalite ma bulie ọdịnaya site na ndu, uzo kwesiri ntukwasi obi na uzo.
SOCXO, ya na SaaS ya na ikpo okwu ya dị iche iche, na-achọ ịkwado ụdị ndị nwere mmasị ịme ya.
Nweta Nnwale SOCXO n'efu
Tags: ikwado ahiaika akwadocontent Marketingịkwado ndị ahịaọrụ nkwadoỌrụ Ndị ỌrụgamificationNkwado MmekọHgba ụgwọ mmekọrịta mmadụ na ibe yana-elekọta mmadụ na-eremmekọrịta
Mukund ghọtara na Advocacy Marketing, okwu na echiche ohuru, na-ekwughachi na ngalaba ahia nke gosipụtara echiche nke ịmepụta ndị na-akwado akara iji nyefee ihe ndị a na-enweta site na ntanetị mgbasa ozi. N’iburu nke a n’obi, Mukund hiwere SOCXO ma mee ka echiche nke ịmepụta mkpokọta weebụ dị mfe ma dị ike na ngwaahịa a na-emepụta nke ọma maka ụlọ ọrụ iji jikọọ & kwado ndị agha ya nke ndị ọrụ, ndị mmekọ na ndị ahịa ka ha bụrụ ndị na-akwado akara na micro-influencers na mgbasa ozi.
Vydia: Jikwaa ọdịnaya vidiyo gị na ikike dijitalụ
Pịa Pịa-Call abụrụla ihe dị mkpa na Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi Nke Ọma